दुवै आँखाको ज्योती गुमाएका खिलबहादुर फेसबुकको माध्यमबाट घर फर्किए | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalदुवै आँखाको ज्योती गुमाएका खिलबहादुर फेसबुकको माध्यमबाट घर फर्किए
Home समाचार दुवै आँखाको ज्योती गुमाएका खिलबहादुर फेसबुकको माध्यमबाट घर फर्किए
दुवै आँखाको ज्योती गुमाएका खिलबहादुर फेसबुकको माध्यमबाट घर फर्किए
सिन्धुपाल्चोक : निलो जस्ताले छाएको एक तले घर । मात्रै दुई कोठा । ढुङ्गा माटोको गारो । काठले बारिएको पिँढी । त्यही पिँढीमा बसेर भलाकुसारी गर्दै थिए एक दम्पत्ति ।
सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकगढी नगरपालिका-८ इर्खुका ३० वर्षीय खिलबहादुर राना मगरको दम्पत्तिले लगनगाँठो कसेको धेरै समय भएको छैन ।
भूकम्प पश्चात नयाँ घर र श्रीमती पाएका खिलबहादुर अहिले निकै खुशी छन् । तर, पाँच वर्षअघि आँखाको ज्योती गुमाइसकेका उनले संसार देख्न सक्दैनन्, मात्र महसुश गर्न सक्छन् ।
बाल्यकाल प्रायको सुखसयलमै बित्ने गर्छ । बाल्यकालकै अनुभवलाई सम्झेर वर्तमानमा रमाउनेहरु पनि धेरै हुन्छन् । तर, राना भने आफ्नो कहालिलाग्दो वाल्यकाल सम्झन चाहदैनन् ।
९ वर्षको कलिलै उमेरमा आमा-बुवालाई गुमाएर उनी टुहुरो बन्न पुगे । भएकी एउटी बहिनीले पनि छाडेपछि रोजीरोटीका लागि गाउँ छाड्न बाध्य भए ।
कामको सिलसिलामा उनी धेरै ठाउँमा भौतारिए । पेट पाल्नका लागि उनले जुठो भाडा माझ्नेदेखि गाइवस्तु हेर्ने र अरुको घरको सरसफाइ गर्ने सम्मको काम गरे ।
मजदुरी गरेर जसोतसो जीवन निर्वाह गरिरहेका रानालाई २०६९ सालमा ठूलो बज्रपात पर्‍यो । उनले दुवै आँखाको ज्योती गुमाए । त्यती बेला उनी गुल्मीमा थिए ।
आँखाको ज्योती गुमाएपछि उनलाई बे्रललिपी अध्ययनका लागि स्थानीयले विद्यालयमा लगिदिए ।
उनले आफ्नो पढाइको यात्रालाई अघि बढाइरहे । बाल्यकालमै घर छाडेका रानालाई घरको त्यती हेक्का पनि थिएन । तर, सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट उनी आफ्नो गाउँ फर्कन सफल भएका छन् ।
‘हामीलाई गुल्मीमा ब्रेललिपी पढाउने शिक्षक हेमनाथ पौडेल र हाम्रै इर्खू गाउँका अमृत दंगाल फेसवुकमा जोडिनुभएछ, अनि फेसबुकमा कुराकानी हुँदै गर्दा मेरो कुरा भएछ अनि समन्वय गरेर मलाई गाउँमा ल्याइदिनुभयो,’ रानाले सुनाए ।
जनप्रतिनिधिबाट आर्थिक सहयोग
धेरै वर्षपछि आफ्नै गाउँ फर्किन पाउँदा राना निकै खुशी थिए । तर, गाउँ र्फकदा उनले पुरानो घर भूकम्पले तहसनहश बनाएको थाहा पाए ।
घर भत्किएसँगै ओत लाग्नका लागि ठुली आमाको घरमा शरण परेका उनले गाउँले र आफन्तबाट सहयोग पाए । वडा कार्यालयले उनको नागरिकता बनाइदियो । त्यति मात्र होइन उनले नयाँ घर पनि पाएका छन् ।
युनएनडीपी र वृहत विपत् जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमको सहयोगमा ढुङ्गा माटोको जोडाइमा जि.आई. तार जाली प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी घर बनेपछि उनी निकै खुशी छन् ।
जीवीकोपार्जनका लागि उनकी श्रीमतीले बाख्रा र कुखुरासमेत पालेकी छिन् । आफूलाई प्राप्त हुने भत्ताबाट पनि घर खर्च जुटाउन सहयोग पुगेको राना बताउँछन् ।
गोरखा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले रानालाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको पुनर्निर्माणको अवस्था अवलोकनका लागि केही दिनअघि सोही ठाउँमा पुगेका गोरखाका जनप्रतिनिधिहरुले दशै खर्चका लागि भन्दै उनलाई नगद दश हजार सहयोग गरेका हुन् ।
उक्त रकमबाट उनले दशै मनाउने बताए ।
पुनर्निर्माणको अवस्था अवलोकन गर्न सिन्धुपाल्चोक पुगेका गोरखाका जनप्रतिनिधि र सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि बीच पुनर्निर्माणको अवस्था र चुनौतीका बारेमा छलफलसमेत भएको थियो ।
उनीहरुले आ-आफ्नो तहमा भएको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अनुभव पनि साटासाट गरेका थिए ।
दशैंको भान्साः स्वस्थ्यकर खानेकुरा कसरी छनौट गर्ने ?
चलचित्र ‘चङ्गा चेट’को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक, ट्रेलर कमेडीले भरिपूर्ण